SOMALILAND oo shaacisay qodobada ay ku haysato DF - Caasimada Online
Home Somaliland SOMALILAND oo shaacisay qodobada ay ku haysato DF
Hargeysa (Caasimada Online) – Xukuumada Somaliland ayaa maanta war kale kasoo saartay wada-hadalada ka socda dalka Jabuuti, xili la rumeysan yahay in lagu kala kacay qodobadii ugu muhiimsanaa ee shirkaasi.
Wasiirka arrimaha dibedda Somaliland, Yaasiin Faratoon oo wareysi siiyay idaacada VOA-da ee laanteeda Afka Soomaaliga ayaa si cad usoo bandhigay dhowr qodob oo lagu heshiiyay wada-hadaladii hore, balse aan weli fulin.
Wasiirka ayaa sheegay in hore loogu heshiiyay in gebi ahaanba la joojiyey hadalka xanafta leh ee warbaahinta isku mariyaan madaxda labada dhinac, iyada oo xiligan arrimahaasi ay mararka qaar sarre usii kiciyaan xiisada labada dhinac.
Qodobada Somaliland ay ku doodeyso inaysan weli fulin dowladda federaalku ayaa ku qotoma kuwo la xiriira deeqaha caalamka in si madax-banaan loo siiyo Somaliland, oo aan loo soo marin dowladda federaalka oo iyadu sii gaarsiisa deeqaha beesha caalamka maamul goboleedyada dalka.
Faratoon ayaa sidoo kale si cad u sheegay in dowladda federaalka ay hore ugala heshiiyeen in si wada-jir ah loo maamulo hawada Soomaaliya, isla markaana si isku mid ah loo qeybsado lacagaha kasoo baxa, midaasi oo aysan weli fulin dowladda Farmaajo, waa sida uu hadalka u dhigaye.